အသက်မပြည့်သော မြန်မာအမျိုးသမီးများ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူကုန်ကူးခံရမှုမြင့်မား_Thai woman held for trafficking Myanmar girls – democracy for burma
On June 25, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma
အသက်မပြည့်သော မြန်မာအမျိုးသမီးများ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူကုန်ကူးခံရမှုမြင့်မား
ပြီးခဲ့သောတနင်္လာနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှရဲတပ်ဖွဲ့များသည် လူကုန်ကူးသည်ဟု သံသယရှိ သူအမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းခဲ့သည်ဟုသိရှိရသည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးနှင့်အ တူမြန်မာအမျိုးသမီး ၁၃ ဦးကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရပြီး ၁၆ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦးနှင့် ၁၈ နှစ်အောက်အမျိုးသ မီးသုံးဦးပါဝင်ကာ ယိုးဒယားနိုင် ငံတွင်းရှိ Ranong
တည်းခိုခန်း တွင် လိင်ဖျော်ဖြေသူများအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် တရားမ၀င်သွေး ဆောင်ဖြားယောင်းခေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
၎င်းင်းတို့အားခေါ်ဆောင်လာ သောအမျိုးသမီးမှာ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး အမည်မှာ Chonthipaporn Palosilpa ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပြီး ထိုင်းအမျိုး သမီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းင်း ထိုင်းလူမျိုး အမျိုးသမီးကို Muang ခရိုင် Tambon Khao Niwet မြို့ရှိ DD တည်းခိုခန်း တွင် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု အခါတွင် အသက်မပြည့်သေးသူ ကို လိင်ဖျော်ဖြေခိုင်းမှုနှင့် တိုင်းတစ်ပါးသားကို ခိုလှုံခွင့်ပေးမှုတို့ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်ဟု သိရှိရသည်။
လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တား ဆီးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Pol Maj-General Chawalit Sawaengphuet ၏ပြောကြား ချက်အရ ၎င်းင်းတို့သည် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မြန်မာအမျိုး သမီးများ Ranong တွင်လိင် ဖျော်ဖြေသူများအဖြစ်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု သတင်းရရှိ ပြီးနောက် ၎င်းင်းတို့အဖွဲ့ AHID ရဲများက စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ ပြီး အဆိုပါတည်းခိုခန်းကိုတွေ့ ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုနောက် ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသောအရာရှိများက အရပ် သားယောင်ဆောင်ကာ ကာမ ၀ယ်ယူရန်သွားရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး နှစ်ဦးမှာ ၁၆ နှစ်အရွယ်မြန်မာ အမျိုးသမီးအပါအ၀င် မြန်မာ အမျိုးသမီး ၁၉ ဦးကိုထုတ်ပြခဲ့ သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက် မြန်မာအမျိုးသမီး ၁၃ ဦးကိုကယ် တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၈ နှစ် အောက်အမျိုးသမီး ၃ ဦးမှာ အတင်းအဓမ်္မရိုက်နှက်၍ ကာမ ဖျော်ဖြေသူအဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းခံ ခဲ့ရပြီး အခြား ၉ ဦးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာကြသူ များဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သောဗုဒ်္ဓဟူး နေ့ကလည်း လူကုန်ကူးသည်ဟု သံသယရှိသူမြန်မာအမျိုးသမီး သုံးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ထိုအမျိုး သမီးသုံးဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးငယ်များကို Tak ပြည်နယ် Mae Sot သို့အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်ကြားမြန်မာ အမျိုးသမီးများကို လိင်ဖျော်ဖြေ သူများအဖြစ် လူကုန်ကူးလျက် ရှိသည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၁၈ နှစ်အောက်မြန်မာအမျိုး သမီးသုံးဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ သည်ဟုသိရသည်။ ထို့ပြင် ပြီးခဲ့ သောဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ကလည်း Muang ခရိုင် Nakhon Sawan မြို့ရှိ ကာရာအိုကေဆိုင်တစ်ခု တွင်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Jarinrat Chong အသက် ၄၈ နှစ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းင်းဆိုင်မှ အသက် ၁၄-၁၇ နှစ် ကြား လာအိုအမျိုးသမီး ၈ ဦး နှင့်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကယ် ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
Thai police yesterday announced the arrest ofaThai woman suspected of human trafficking and the rescue of 13 Myanmar women – includinga16-year-old and three girls under 18 – allegedly lured into sex work ataRanong guesthouse in Thailand.
Afteratip-off from the Freeland Foundation that some Myanmar women under 18 were doing sex work in Ranong, an investigation by Thailand’s Anti-Human Trafficking Division (AHTD) police found this was taking place in the guesthouse. So they organiseda“sting” in which an undercover official agreed to buy sex from two women (including the 16-year-old girl) out of 13 Myanmar women presented to him, AHTD chief Pol Maj-General Chawalit Sawaengphuet said.
In Muang district in Nakhon Sawan, AHTD police on June 16 arrested Jarinrat Chong, 48,akaraoke bar owner, and rescued eight Laotian girls aged 14-17 and one 17-year-old Myanmar girl from the bar. This case caused Thai national police chief Adul Saengsingkaew to order the transfer of Muang Nakhon Sawan superintendent Pol Colonel Khanakorn Rungkhajornklin to an inactive post, and to transfer several other police to work in Provincial Police Region 6.
BurmaDD GuesthouseKhao NiwetMyanmarRanongThailandWOMEN TRAFFICKING
U YE HTUT: အရေးပေါ်ကာလစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီက ကြေညာချက် အမှတ် ၁/ ၂၀၁၃ ကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။-BAN ON TIME MAGAZIN ISSUE
Thailand to ban Myanmar illegal documents holders